Wararkii ugu dambeeyay madaafiicda lagu weeraray madaxtooyada iyo caruur ku dhimatay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay madaafiicda lagu weeraray madaxtooyada iyo caruur ku dhimatay (SAWIRO)
Waxaa faah-faahin dheeraad ah laga helayaa tiro madaafiic ah oo maanta lagu weeraray xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo maanta lagu soo gaba-gabeeyay xaflad ay xilalka ku kala wareegeen madaxweynihii hore iyo kan cusub ee Soomaaliya.
Tirada madaafiicdaasi oo gaareysay illaa 4 hoobiyaal, ayaa mid ka mid ah wuxuu ku dhacay guri ay degan yihiin dad shacab ah, waxaana ku dhintay labo caruur oo walaalo ah, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacmeen labadii waalid ee caruurtaasi dhalay.
Seddax qof kale oo shacab ah ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen madaafiic kale oo ku dhacday xaafaha ku yaala degmada Wardhiigley, wuxuuna weerarkaan kusoo beegmayaa xilli maanta ay xarunta madaxtooyada ka socotay xaflad xil wareejin ah.
Illaa iyo haatan lama oga goobta rasmiga ah ee madaafiicdaasi laga soo tuuray, balse xiriiro kala duwan aynu la sameeynay saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa inoo sheegay in ciidanka nabad-sugidda ay weli wadaan baaritaano ay ku raadjoogaan goobihii laga soo tuuray madaafiicdaas.
Weerarkaan ayaa u muuqda mid fariin cad u ah madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, wuxuuna weerarkaan imaanaya xilli maanta uu xilka kala wareegayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.